अदालतको निर्णयले ट्रम्पलाई लाग्यो झट्का, अमेरिकामा नेपाली कति सुरक्षित ? | suryakhabar.com
Home प्रवास अदालतको निर्णयले ट्रम्पलाई लाग्यो झट्का, अमेरिकामा नेपाली कति सुरक्षित ?
अदालतको निर्णयले ट्रम्पलाई लाग्यो झट्का, अमेरिकामा नेपाली कति सुरक्षित ?
on: २६ पुष २०७४, बुधबार ११:५८ In: प्रवासTags: अदालतको निर्णयले ट्रम्पलाई लाग्यो झट्का, अमेरिकामा नेपाली कति सुरक्षित ?No Comments
काठमाण्डौ । युवा आप्रवासीहरुलाई देशनिकालाबाट जोगाउने एउटा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा उल्टाइदिएको छ ।
क्यालिफोर्निया र अन्यवादीहरुले डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रोक्न अनुरोध गर्दै हालेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विलियम एल्सुपले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
डीएसीएको पक्षमा रहेका वकिलहरुले अदालतले कदम नचालेमा युवा आप्रवासीहरु गम्भीर र अपूरणीय हानीको शिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको एल्सुपले बताएका छन् ।
डीएसीएले बालबालिकाका रुपमा अवैध तरिकाले अमेरिका ल्याइएका वा परिवारसँग आएर भिसा अवधिभन्दा बढि बसेका ८ लाख युवालाई संरक्षण गरेको थियो । यो कार्यक्रमले हजारौं कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत समेटेको थियो ।
डीएसीए प्राप्त गर्नेहरुले उनीहरुको दुई वर्षे अवधिको बाँकी समय अमेरिकामा बस्न अनुमति पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र स्ट्याटस अन्त्य हुन लागेकाहरुले पनि अर्को दुई वर्षे अवधिका लागि आवेदन दिन एक महिना समय पाउनेछन् ।
यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बोर्डका एक वकिल जेफरी डेभिड्सनले डीएसीएको आधारमा धेरैले लोन लिएको, विद्यालय भर्ना भएको र बिहे गरेर परिवार सुरु गर्ने निर्णयसमेत लिएको भन्दै कार्यक्रम खारेज हुँदा उनीहरु संकटमा पर्ने औंल्याए । ‘सरकारले कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय लिँदा यी कुराहरु विचारै गरेन,’ अदालती सुनवाईमा उनले भने । अदालतको उक्त निर्णयसँगै अमेरिका बसेका नेपाली युवाहरुलाई पनि राहत मिलेको छ । अब उनीहरुले उक्त कदमबाट देश छाड्नुपर्ने स्थिति भने नरहेको बताइएको छ ।
Tags: अदालतको निर्णयले ट्रम्पलाई लाग्यो झट्काअमेरिकामा नेपाली कति सुरक्षित ?
२६ पुष २०७४, बुधबार ११:५८